Ciidamada Itoobiya oo la wareegay ammaanka Cabdirashiid Xidig iyo Seeraar - Awdinle Online
Ciidamada Itoobiya oo la wareegay ammaanka Cabdirashiid Xidig iyo Seeraar
Ciidamo ka tirsan Milateriga dalka Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM ayaa la sheegay in ay la wareegeen amaanka Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo sheekh Cabdinaasir Seeraar Maax oo labadooduba sheegtay in ay yihiin madaxweynaha maamulka Jubbaland kadib doorashooyin is diidan oo ka dhacay Kismaayo.
Xildhibaano ka tirsan Golaha Is-beddel doonka Jubbaland ee ku sugan Kismaayo ayaa Awdinle Online u xaqiijiyay in labadan masuul, Xildhibaano iyo odayaal ka tirsan garabka Xidig iyo Seeraar ay amaankooda la wareegeen Ciidamada Itoobiya ee ku sugan Kismaayo.
“Amaankayna waxaa masuuliyadiisa qaatay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Itoobiya ee ku sugan Kismaayo waxaana arintaan ay timid ka dib markii ay nasoo food-saartay cabsi iyo hanjabaadyo joogto ah” ayuu yiri Cabdirashiid Maxamed Xidig oo sheegtay in uu yahay madaxweynaha Jubbaland.
Dhinaca kale, ciidamada Itoobiya ayaa si khasab ah maamulka Jubbaland uga sii daayaan shaqsiyaad yar oo ka mid ahaa tiro maxaabiis aheyd oo u xiran maamulka Jubbaland, kuwaas oo la sheegay in ay qayb wayn ka ahaayeen xoogaga is-beddel doonka Jubbaland.
Ciidamada Itoobiya ayaa u balan qaaday Seeraar iyo Xidig in ay xaqiijin doonaan amaankooda iyagoo fulinaya amar dowladda dhaxe iyaga iyo inta kale ee ka tirsan dhaq dhaqaaqa siyaasadeed ee looga soo horjeedo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe.
Previous articleIsrael oo shaacisay heshiis ay la saxiixaneyso dalka Khaliijka
Next articleHowlgal Baaritaan oo dad lagu soo qabqabtay oo xalay ka dhacay G/Banaadir